Iprofayile yenkampani - uLinyi Guoshengli Packaging Material Co, Ltd.
Ngokukodwa ukuPakisha okuguqukayo okuCwangcisiweyo kungaphezulu kweminyaka engama-20
Linyi Guoshengli Packaging Material Co., Ltd. yinkampani oluncedisayo Linyi Guosheng Umbala Printing kunye Ukupakisha Co., Ltd leyo yasekwa ngo-1999 ekuqaleni. Singumthengisi opakisheneyo opakishwe kumgangatho ophakamileyo, okhethekileyo kwifilimu yeRockstock kunye nakwizingxobo ezenziwe kwangaphambili zokuvelisa ngaphezulu kweminyaka engama-20. Njengenkulumbuso yoshicilelo eguquguqukayo kunye nenkampani eguqukayo, sibonelela ngezisombululo zokupakisha kwinkqubo yemibala ye-10 yoshicilelo kwiindidi ezahlukileyo zeefilimu kunye nobubanzi. Ukusuka kuyilo ukuya ekuguqukeni, sizibophelele ekunikezeleni ngeenkonzo zokuma ngonxibelelwano oluphendulayo noluchanekileyo.
Iimveliso ezikumgangatho ophezulu zivela kwiindawo eziphambili. Sityala iimatshini ezizenzekelayo kwiinkqubo zokuvelisa ngokupheleleyo ukuvelisa kunye nokuprinta uluhlu olubanzi lweemveliso zokupakisha eziguqukayo. Kule minyaka idlulileyo, siye sazenzela igama kolu shishino lokuvelisa ukuphakheja okuguqukayo okusebenza ngokuthembekileyo nangokungaguquguqukiyo.
Ukupakisha kweGuoshengli liqabane lakho elinikezela ngenkonzo epheleleyo. Injongo yethu kukwenza izisombululo zokupakisha ezisekwe kwintengiso kunye nabathengi ukukhulisa uphawu lwakho kunye nokunceda uphawu lwakho lomelele. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo ethile okanye ufuna uncedo ekufumaneni iphakheji eguqukayo egqibeleleyo yemveliso yakho, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi kwaye siya kukuvuyela ukukunceda.
Dibanisa amandla eGuoshengli ukuze uzise umbono wakho ebomini
Imishini yokuPrinta eyi-10-Umbala oPhezulu weSantya sokuPrinta
Sinoomatshini bokuprinta abayi-6 ngokupheleleyo. Ububanzi obuphezulu bokushicilela yi-1300mm. Idijithali, ngokuzenzekelayo, isantya esiphezulu, ezilungele zonke iintlobo zezinto zokuprinta.
Zenzekelayo High Speed ​​wokulaminetha Machine
Ububanzi wokulaminetha olusebenzayo yi 1300 mm, nto leyo efanelekileyo kuzo zonke iintlobo zeendawana inwebu kwaye ukuvelisa iintlobo ezahlukeneyo inwebu ezihlanganisiweyo kakhulu, ezifana umboniso ukumelana ubushushu, ukumelana neoli, umqobo ophezulu kunye nokumelana kwemichiza.
Isantya sokukroba umatshini
Ububanzi bayo obukhulu bokusika yi-1300 mm kwaye ubuncinci bobubanzi obuyi-50 mm, inkqubo yokusika kukucheba ubude bezinto ezibunjiweyo zobubanzi obukhulu kumacandelwana obubanzi obufunekayo ngokungqinelana nesidingo sokwenene.
Iiseti ezingama-49 zoomatshini abaguqukayo abaphambili
Sineeseti ezingama-49 zoomatshini abaguqulayo, ukuvelisa iintlobo ngeentlobo zeebhegi kunye neepakethi ezinezinto ezahlukeneyo ezinjengefoyile yealuminium, iplastiki, iphepha lekraft, njl., Ukuqinisekisa ixesha lokukhokela ngokukhawuleza.
Inkampani yethu ixhotywe ngezixhobo zovavanyo ezipheleleyo kolu shishino, kwaye yamisela ilebhu yeshishini elizimeleyo, elibonelela ngenkxaso enamandla yengqondo kunye nesiqinisekiso sehardware yophuhliso lwemveliso ekumgangatho ophezulu.
Izixhobo zoNyango lweNkunkuma ye-ITO
Sisoloko sinikela ingqalelo enkulu kukhuseleko lokusingqongileyo, kwaye singenise izixhobo zokubuyisa inkunkuma ye-ITO kunye nezixhobo zonyango eziseSpain.
Nxibelelana nathi ngoku!